Dhageyso Warbixinta Afar Sanadood Ka Dib Weerarkii WestGate Qeybta(2)aad.
Monday September 25, 2017 - 20:08:57 in Wararka by Super Admin
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa bilowday Warbixino Taxane ah oo ay kaga hadleyso Afar Sano Kadib iyo weerarkii Taariikhda galay ee Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ay ku qaaday xarunta West Gate ee magaalada Nayroobi ee xarunta dalka Kenya.
Qeybta Kowaad ee Warbixinadan Taxanaha ah intii la socotay waxey Idaacada Islaamiga ah ee Andalus kaga hadashay kuna soo gudbisay sababta keentay inuu dhaca Weerarkii West Gate.
Dhageystayaasha iyo Akhristayaasha Webseydka Calamada waxaan idiin soo gudbineynaa Qeybta 2aad ee Warbixinadan Taxanaha ah,waxeyna Andalus qeybtaan diiradda ku saartay, sida uu u dhacay weerarkii Westgate, sidii uu ku bilowday iyo sida ay xaaladu ahayd mudadii ay socotay go’doomintii dhismahaasi.
Halkan Ka Dhageyso Warbixinta Qeybta 2-aad.